Qabqableyaal ayaa Somaliland Adeegsaday – WQ. Liban Ahmed – Radio Daljir
Maajo 31, 2010 12:00 b 0
Ismaandhaafka siyaasadeed ee ka taagan gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn waa mid ka dhashay dano siyaasadeed oo iska-horimanaya. Dhawr tusaale ayaa la soo qaadan karaa si loo muujiyo saamaynta ismaandhaafkaas siyaasadeed ku leeyahay nolosha dadka Sool, Sanaag iyo Cayn gaar ahaan beesha Dhulbahantaha. Dabayaaqdii sannadkii 2002dii ayuu madaxweynaha Somaliland, Daahir Riyaale Kaahin, booqday magaalada Laas Caanood.
Ciidan uu soo diray wasiirkii arrimaha gudaha ee Buntland ee xilligaas, Axmed Cabdi Xaabsade, ayaa weerar ku qaaday Riyaale iyo wefdigiisii. Weerarkaas oo keenay geerida dad rayid ahaa. Si deg-deg ah ayuu Riyaale uga baxay Laas Caanood. Xaabsade oo wareysi siiyey Laanta Af Soomaaliga ee BBCda ayaa sheegay in Riyaale gardarnaa waayo ? wuxuu soo booqday magaaladayda. Ma anigaa ugu tagay Boorame??
Shan sanadood ka dib dhacdadaas ayuu Axmed Cabdi Xaabsade, oo lagaga awood roonaaday loollan awoodeed oo ka dhacay Buntland, ku dhiirri-geliyey ciidan beeleed togga Waqi-dari fadhiyey oo labo nin- Dalbac iyo Ina Ceydiid Dhadhable-hoggaaminayeen inay magaalada soo galaan. Taana waxay keentay in ciidankii Somaliland ee Adh-caddeeye fadhiyey ay Laas Caanood soo galaan ka dib marki taageerayaashii Xaabsade ay xabadda ku jeediyeen dadkii ay u aqoonsadeen ciidanka Buntland.
Xaabsade oo wareysi siiyey Laanta Af Soomaaliga ee BBCda ayaa, si uu u buriyo bayaan madax-dhaqameeyadu ka soo saareen qabsashada Laas Caanood, sheegay inuu isagu u yeedhay ciidanka Somaliland, odayaashuna talada guddoomiyaan balse aanay goyn.
Dadka aan wax badan kala socon nolosha siyaasadeed ee Sool waxay si fudud u rumeysteen in Xaabsade yahay nin beesha Dhulbahantaha u kaxeyn kara meeshuu doono. Runtuse way ka duwan tahay taas: Xaabsade ciil iyo cadho ayuu Hargeysa kala soo taagey markii Allaha u naxariisto Maxamed Ibraahim Cigaal, madaxweynihii hore ee Somaliland, xilka Afhayeenka Golaha Waakillada ka qaaday Xaabsade oo kaalin weyn ku yeeshay kulankii dhidabada loogu aasay is-maamul goboleedka Buntland sanadkii 1998kii. Sida ay ugu muuqan kari weyday Marxuum Cigaal in hab Hartinimo ah ismaamul lagu samayn karay, ayay hoggaamiyayaasha Buntland ugu muuqan kari weyday dhibta Buntland iyo beeshiisaba u geysan karo mid ka mid ah qotomiyayaasha Buntland oo gardarro siyaasadeed la kulmay wax u garaabana waayey.
Qabsashadii Laas Caanood ka dib maammulka Somaliland waxa ay talo kaga ururtay inuu dhegeysto hawl-wadeenno dadkooda la hadli kari waayey, quursadayna madax-dhaqameedka inkastoo guurtidu ka mid tahay tiir ka mid tiirarka Somaliland ku dhisan tahay.
La mood, mase noqon
Sida dad badan ay la tahay, Buntland waxay noqotay tijaabo siyaasadeed oo beelaha Sool, Sanaag iyo Ceyn ay ku hungoobeen. Waxaase xusid mudan in aan la helayn oday la yiraahdo Buntland oo meel fadhiya: dadka Sool, Sanaag iyo Ceyn waxay Buntland ku leeyihiin hawl-wadeenno iyo madax-dhaqameed kaalin ku lahaa go?aano badan oo la gaaray, go?aanadaas oo keenay in horumarintii gobollada Sool, Sanaag iyo Ceyn la illoobo oo la tegeero dowladdii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf hoggaaminayey oo marar kala duwan fadhiggeedu ahaayeen Jowhar, Baydhabo iyo Muqdisho. Arrintan waxay keentay soo bixista hoggaanka Sool, Sanaag iyo Ceyn oo taageerayaashiisa badankoodu yihiin kuwii Buntland taageeri jiray marna aan turxaan-bixin ku samayn siyaasadda bulsho ee ismaamul-goboleed tolnimo iyo talo-wadaag lagu sameeyey.
Hoggaanka Sool, Sanaag iyo Ceyn wuxuu qaadan karaa kaalin si meel la isugu keeno dhinacyada siyaasadda ee Sool, Sanaag iyo Ceyn. Taasi u la maan jeedo iyaga ayaa noqon kara hoggaanka keliya ee dadka SSC u arrimiya.
Kala go? deg-deg ah
Maammulka Somaliland marnaba muu soo bandhigin jaangooyo siyaasadeed ku salaysan dan-wadaagnimo. Cuskashada soohdin gumeyste ka tagay kama duwana barnaamijkii siyasadeed ee ururkii SNM uu soo saaray 1990kii, barnaamijkaas oo xusayey in dowlad ay wada dhisi doonaan jabhadaha mucaaradku marka la rido maammulkii Siyaad Barre. Jabahaduhu waxay ahayeen kuwo beelo ku dhisan oo waxaa jiray beelo diiddanaa keli-talisnimadii dowladdii militariga balse u arkayay jabhadahii mucaaradka kuwo doonayey inay maammul xun ku baddalaan maammul ka sii xun. Taariikhda ayaa marqaati ka ah sida jabhadihii mucaaradku ugu biyo-shubteen dumiyeyaal ka darnaaday keli-taliskii. Tani waa mid ka mid ah sababaha Somaliland ugu adkeysato soohdimaha gumeystihii ka tegey. Dastuurka ururkii SNM wuxuu xusay midnimada Soomaaliyeed. Dastuurkaas wuxuu gaar u ahaa tageerayaashii ururkii SNM. Somaliland goonni-isu-taaggeeda ayaa lagu dhawaaqay sanadkii 1991kii iyadoon dastuurka isbeddel lagu samayn. Haddii Somaliland si aan ka fiirsasho lahayn u la midowday Koonfurta Soomaaliya sannadkii 1960kii, hoggaamiyayaashii ururkii SNM waxay sannadkii 1991kii gaareen go?aan deg-deg ah oo uu madaxweynihii ugu horreeyey ee Somaliland, Cabdiraxmaan Axmed Cali (AUN), ku tilmaamay mid laga noqday ka dib markii xilkii madaxwynimo laga qaaday oo uu maammul-u-eke- la sameeyey Jeneraal Maxamed Faraax Ceydiid (AUN) sagaashanaadkii.
Maammulkii Cigaal iskama xilsaarin gobolladi maamulka Somaliland uusan gaarin waayo wuxuu ka soo kabanayey dagaallo sokeeye hase yeeshee wuxuu Marxuum Cigaal u sheegay Laanta Focus on Africa ee BBCda sanadkii 1995tii in Laas Caanood iyo Boorame ?yihiin meelo argagixiso joogaan.? Ra?iisal Wasaaraha Itoobiya, Meles Sanaawi, oo arrintaa wax laga weyddiiyey ayaa Cabdullaahi Xaaji, weriyaha Laanta Af Soomaaliga ee BBCda, u sheegay in uu garanayo ?xadhkaha siyaasadda Soomaalida? (We are familiar with the intricacies of Somali politics.?)
Marxuum Cigaal muu ahayn madaxweyne qabqable dhegeysta. Hal-beegga uu u adeegsan jiray culayska siyaasiga beelaha Hartiga ka soo jeeda wuxuu ahaa xiriidhka ka dhexeeya siyaasiga iyo madax-dhaqameedkiisa.
Qabqableyaal ayaa ku guuleystay kala fogeynta dadka Somiland goonni-isutaaggeeda doonaya iyo dadka midnimada Soomaaliya doonaya ee ku wada nool dhulkii Biritishku maammuli jiray. Somaliland oo si toos ah u la hadasha dadka doonaya midnimada (ha noqdeen kuwo tageersan hoggaanka SSC ama Buntland) ayaa noqon kara hindise keeni kara in laga wada hadlo sida loo wadaagi karo aaye siyaasadeed ama derisnimo wanaag loogu wada noolaan karo.
Il – wardheernews.com
Gudd. gobolka Mudug oo ugu baaqay Somalida koonfurta gobolka Mudug in ay ku laabtaan deegaankoodii …
Gen. Shire, M/weyne ku xigeenka Puntland, oo qaabilay qunsulka cusub ee Ethiopia u fadhiyi doona Puntland & xafiiska qunsuliyadda oo laga furay Garowe.